भृकुटी कागज कारखाना सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव | Ratopati
निजीकरण गरिएका उद्योग फिर्ता ल्याउन सरकारी समितिको राय
personएलिजा उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeचैत १०, २०७७ chat_bubble_outline0
यता, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्टलाई एकीकरण गरेर एउटै व्यवस्थापनले दुईवटा संस्था चलाएर सरकारी खर्च घटाउन सकिने सम्भावना देखाएको छ । उद्योगको अवस्थाको विश्लेषण सञ्चयकोषका पूर्व सिइओ डा. कृष्णप्रसाद आचार्य र राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएका डा. गोपाल भट्टले गरेका थिए ।
उद्योग मन्त्रालय संस्थान महाशाखाका यज्ञराज कोइराला प्रतिवेदन प्राप्त भएको र त्यसलाई छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँछन् । समस्या समाधान र वैकल्पिक प्रयोगबारे दिइएको सुझाव अध्ययन पश्चात कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ । उद्योगहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउन अध्ययन गरिएको र बन्द भएका उद्योगलाई के गर्ने भन्ने आधार प्रतिवेदनले दिएको उनको बुझाइ छ ।
सरकारले निजी तथा सरकारी रुग्ण उद्योग समस्या र सञ्चालन उपायबारे मोडालिटीसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वसञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलमा अन्य पाँच सदस्य पनि छन् । कार्यदलले उद्योग मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।
क्षमता भन्दा कम उत्पादन गर्दा खर्च धान्नै सकस
संस्थानहरूले आफूले उत्पादन गर्ने क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्दा कार्यालय खर्च धान्नै नपुगेको अध्ययनमा भनिएको छ । गोरखकाली टायर उद्योगले ६६२ रोपनी जग्गा गोरखामा ओगटेको छ । त्यसलाई एउटा औद्योगिक ग्रामकै रुपमा चलाउन सकिने अध्ययनको सुझाव छ ।
अहिले रेडियल टायर (ट्यूवलेस टायर) को प्रविधि आइसकेका बेला गोरखकालीले ट्यूववाला टायर उत्पादन गर्छ । यसमा प्रविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । अध्ययनका अनुसार ३ सय थान टायर उत्पादन गरेर कर्मचारीदेखि व्यवस्थापनसम्मको सबै खर्च धान्न सकिँदैन । कम्तिमा पनि भारत र चीनको उत्पादन, बजार र गुणस्तरलाई अध्ययन गरेर मात्र उत्पादन शुरु ग¥यो भने नाफामा चल्न सक्ने भनिएको छ । गोरखकालीमा नयाँ प्रविधि जडान गरेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने अथवा आफैंले नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव छ ।
संस्थानहरु के कति कारणले डुबे अथवा चल्न सकेनन्, सोबारे सरकारले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सबै सरकारी उद्योगमा प्रविधि, बजार जस्ता विषयको अनुसन्धान नै नगरी जागिर खाने प्रवृत्ति मात्र देखिएको भन्दै समितिले अनुसन्धान, प्रविधि सबै कुरालाई ध्यान पु-याए मात्र नाफा गर्न सकिने भनेको छ ।
#भृकुटी कागज कारखाना
छ व्यापारिक फर्मलाई ३० हजार जरिवाना